Qoraalladii La Qoray Maxamed Dheere Gar Kama aysan Hadlin ?!!!
Sahid maxamed yusuf
AL-salaamu caleykum wx wb:
Markaan dhageystay wareysigii Maxamed dheere guddoomiyaha shabeellada dhexe,kadibna aan akhriyey waxyaabihii ay ka qoreen dadkii ka soo horjeeday,walow aanan akhrin hal ruux oo difaacaaya, se ani ahaan ma aan gareysan eedeyntooda la xariirta gaalnimada,ceyda,towbo ku boorinta,iwm.
Sababtuna waxa weeyaan waxaan ahay ruux kala yaqaana xijaabka iyo niqaabka , se dadka badankiisa wax qoray wey iskaga darsan yihiin, waxaanse ka sii murugooday dalladaculumadda ee muqdisho oo uu hogaaminaayo caalimka weyn ee Shiikh Nuur Baaruud,sida ay uga fakatay khilaafka u dhaxeeya Xijaab & niqaab.
Waxaana shiikha hadalladiisii ka mid ahaa: ( Shiiq Nuur Baaruud oo u hadlay Dallada Culumadda Soomaaliyeed ayaa sheegay in Xijaabka ay jidaysay Diinta Islaamka sidaas darteedna goaan kasta oo lagu mamnuuco Xirashadda Xijaabku ay tahay mid ka hor imaanaya Aayad ka mida Aayadaha Quraanka oo qeexaysa Xirashada Xijaabka).
Runtii waxaa haboon sida Islaamku qabo marka aad mas,allad diini ah aad taxliilinayso in aad ugu horeynba koobto mas,alladda dhinacyadeeda oo idil,kadibna aad la soo baxdo wax culumadu ay u yaqaannaan( taxriiru maxalu nizaac) oo macnaheedu yahay in la soo koob waxa la isku khilaafsan yahay ama haddii aan si casri ah u iraahdo waa in dhibcaha xuruufta dushooda lagu qoro, macnaa wax kasta cadee oo miiska soo saar !!!
Haddaba Akhristayaasha ayaan weydiiniye Maxamed dheere ma wuxuu diidan yahay?
Xijaabka mise Niqaabka? maxayse kala yihiin Xijaab & niqaab? Haddii aan isku dayo in aan labadaas su,aalood kaaga jawaabo,tan hore: hadallada ka soo yeeraaya Muqdisho ama soomaaliya oo idil ama qoraaladu ay ka turjumayaan ma ku siin karaan jawaabta saxa ah ee waad ku wareereysaa? se si fudud waxaad jawaabta u heleysaa markaad dhageysato wareysiga Maxamed dheere oo arrintaas uu si hadaladooda ka cad cad ugu bayaanshay !!!! wuxuu yiri:
(Culimaa'u diinka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqeynaa Ciddii haysa aayad diideysa ama cawro ka dhigeyso gabadhaha wajigeeda iyo xadiis saxiix ah ha noo soo gudbiso, haddii arintaa in qofta wajigeeda ay banayso diinta ay ka hor imaneyso waa ka noqoneynaa, Ilaahna debmbi dhaaf ayaan weydiisaneynaa, laakiin kuwa cabdi qaasin soo abuuley oo koonfurta ka nacnac leh waxay hayaan diin Islaam ma ahan, maxaa yeelay masaajidada ay ka nacnac leeyhiin ayaa gabadha hortooda lagu kufsanaa, masaajidana kama sheegin... ma fahamtay haatan, haa dheh jaalle waa warkii kacaankee !!!! Tan labaadna haddii aan isku dayo in aan ka jawaabo xijaabka & niqaabku farqi cad ayey leeyihiin, oo xijaabku waa asturka haweenka marka laga reebo wajiga,waana la isku raacsan yahay waajibnimadiisa wax diiday ma jiraan.
Niqaabkase oo ah marka la daboolo wajiga oo idil ama hal il hala furo ama jeex ha loo sameeyo.
waana garanaynaa sida ay iskugu khilaafsanaayeen niqaabku culumaddii casrigan ma waajibaa mise waa sunne? waxayna aheyd mas,allad kitaabo badan laga alifay si fara badanna uu ruux kastaayiba fikradiisa u daafacay.
culumaddii waaweyneyd ee casrigan joogtay Allaah gidigood ha u naxariistee maanta wey naga hooseeyaan gidigoodba, khaasatan labada madarasood ee salafiyadda Ibnu Baaz & Al-baani Allaah gidigood ha u naxariistee .
Sida ay horayba iskugu khilaafeen culumaddii hore laga soo bilaabo Saxaabaddii rasuulka ilaa maanta aan joogno.
Marka Maxamed dheere ma wuxuu diiday xijaabka mise niqaabka? waa taas midda aan leeyahay waddaada dallada muqdisho ma aysan faafaahinin ma kas bey uga tageen mise wey ka hoos baxday !!! waxaase la yaab ah Maxamed dheere wuxuu ka codsaday in ay ula yimaadaan Aayad ama xadiis Qadci ah oo arrinka ka saareysa mas,allah khilaafiyah oo ka dhigeysa waajib qadci ah !!!
Akhristoow ayadoo lala qabo in aan ahay ruuxii ugu horeeyey- intaan akhriyey- ee difaaca maxamed dheere maxay kula tahay waxa arrinkaas iigu wacan?!!!!
Aan isku kaa sheegee horta la Qabiil ma ahi ? isku xulufo siyaasadeedna ma la ihi oo runtii Maxamed dheere & C/qaasim & C/llaahi yusuf & Qanyare, Caato,muuse suudi,moorgan, Jees, mowliid macaane,shaati guduud iwm waxaan u arkaa in aysan mudneyn ka talinta Soomaaliya ee waxaan doondoonayaa kuwo aan u bixiyey ( Rooti)1992 Aaar inta kale kale ma rootiyaa?!!! oo ah kontankii sano ee ugu danbeysay kuwii soomaaliya ay wax soo bareysay ee Buugga & Qallinka haayey ee buntuqa kula daba feylay oon ka midka ahay waa kuwaas kuwa soomaaliya ku khasaartay ee ma ahan dadka la dilay,guryahay dundumay,ubadka la laayey ,hooyooyinka la kufsaday ama aha kuwa la guday,duqeyda la silciyey ee is dhiib la leeyahay markey tusbaxa qaadan lahaayeen.
Haddii aan u soo noqdo waxa difaaca igu bixiyey waa garta uu la soo baxay Maxamed dheere waxaana soomaalidu tiraahdaa ( gaal dil gartiisana sii) haddii aan indhacade warkiisa u raaco, waxaase la yaab ah indhacde oo la yiri waa wadaad ku xigga shiikh xasan daahir awees oo tacadi ku tilmaamaaya dadka ku hoos nool maxamed dheere se aan arkeynin kuwa laga itaalka roonyahay ee ku nool kabtan balaas, janaalle, qoryooley, mudul baraawe, jilib,jamaame,xaramka iwm. waxyaabaha uu ka hadlay Maxamed dheere markii uu ka jawaabaayey dadka uu ka cabsaday in ay niqaabka ugu soo dhuuntaan wuxuu sheegay lix qodob oo ay ku dhaqmaan beesha c/qaasim, indhacade,deelaaf, shiikh xasan daahir awees, kuwaas oo marag madoonta ah,oo haddii caddee la yiraahdo la mid ah qorrax maalin joogta oo la yiri caddee,sidee loo cadeeyaa?!!!
1) Gabdhaha ayaa masaajidka hortiisa ama dhexdiisa lagu kufsadaa mana ka hadlaan.
2) Dadka ayaa madax furasho loo xirtaa kamana hadlaan waa kuwuu Allah cadeeyey in uu asagu qiyaamah la doodaayo ruux xor ah midka xorriyaddiisa ka qaada,
3) guryihii dadka ayey heystaan & digfeer oo la isku aroosaayo kamana hadlaan.
4)Beerihii dadka ayey heystaan oo isku dirirayaan dhexdooda indha cadde & jeelaaf.
5)Lacag faalso ah ayey ma guurtadii iyo xoolihii dadka uga gadanayaan deelaaf mana ka hadlaan ee sadaqo ayey ka bixiyaan,lacag faalso oo sadaqo lagu bixiyey subxaanalaah !
6) Dhirtii ayey xaalufiyeen ayax diirtay dhulkii ayey noqdeen siduu bacadle sheegay !!!
Waxaas haddii aadan waxba ka qaban ha is kor saarin xijaab & niqaab ileen isma qabtaane !!!!
Dhacdada uu ka hadlay Maxamed dheere ee ah in loogu soo gabanaayo niqaabka wax ma akhrisiin miyaa, waxay ka dhacday kuweit oo niman niqaab qaba ay meelo caam ah ay qarxiyeen ilaa dawladda kuweit ay mamnuucaday in naag niqaab qabta ay baabuur wado.kuweit ma gaalaa marka? wixii amniga wax u dhimaaya in laga hortago wey banaan tahay? Islaamkuna wuxuu qabaa in dhibta oo la iska riixo laga hormariyo nafci la soo jiito.Haddii dhimasho iyo kharibaat iyo fitno uu niqaabku keensan karo asaga ayaa loo kaadinayaa haddiise wajiga furan uu fidno iyo sino iyo anshi xumo uu keensanayaa waxay culumadu qabaan in la daboolo markaas haddii fidno laga baqdo.
Runtii maqaalka waxaan ku soo gabagabeynayaa gaal dil gartiisana sii , ruuxna yuusan u maleynin in aan maxamed dheere jeclahay ama aan u xaglinaayo, ama uu ceeb ka saliim uu yahay, balse tacadi fara badan ayaa laga sheegay iyo dagaallo uu ku qaaday raaga ceelle,mahadaay iyo meelo kale.
Se hor iyo horaanba waxaan anigu arrinkeygu ku kooban yahay waxa ay ku radiyeen kuwii ka soo horjeeday, gar uma aanan arkin taas kaliya ayaanan difaacay se maxamed ahaan bari ayaan ka ahay in aan xumihiisa difaaco balse teyda ayaanan difaaci karin!!!
Ugu danbeyn ruuxii wada akhriyey maqaallada arrinkaas laga qoray oo keyguba ku jiro ha i xasuusiyo wixii aan khalad u fahmay,ama aan ku gadoob falay islaam ahaan iyo maqaal ahaan ba.
Gabdhaha muslimiinta ah ee Allaah dartiis u gashtay niqaabka isna asturay ee dartiis lagu xiray waxaan ku leeyahay sabra inallaaha maca saabiriin!!!
wixii kheyr ah ee aan sheegay allaah ayaa i waafajiyey,wixii shar ahna waa nafteyda iyo sheydaan Allaah iyo rasuulkiisuna barii ayey ka yihiin,
fii ammaanilaah !!!
Faafin: SomaliTalk.com | April 8, 2004
Qoraaladii hore ee Saahid